कांग्रेसले भन्यो– खोई ! कहाँ छ दुई तिहाईको सरकार ? (भिडियोसहित) | NewsKarobar
गृहपृष्ठ कांग्रेसले भन्यो– खोई ! कहाँ छ दुई तिहाईको सरकार ? (भिडियोसहित)
कांग्रेसले भन्यो– खोई ! कहाँ छ दुई तिहाईको सरकार ? (भिडियोसहित)
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार ६ महिनामा ‘जस्ट पास’ मात्र भएको बताएको छ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको ठीक ६ महिना पुगेको सन्दर्भमा आफ्ना धारणा तय गर्दै कांग्रेसले सरकारको यस्तो मूल्यांकन गरेको हो ।
आइतबार अपराह्न पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार प्रभावकारी हुन नसकेकाले जस्ट पासमात्र भएको आफुहरुको मूल्यांकन रहेको बताए । जस्ट पास भएर ‘समृद्ध नेपाली, सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयन नहुने भन्दै उनले कमजोरी सच्याउन सरकारलाई आग्रह गरे । ६ महिनामा सरकार सात ठाउँमा चुकेको पनि कांग्रेसको निष्कर्ष छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, संघीयता, सुशासन, मूल्यवृद्धि, समृद्धि र न्यायालयमाथिको व्यवहारको विषयमा सरकार चुकेको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
कांग्रेसको चाहना सरकारले समृद्धिको सपनालाई अघि बढाओस् भन्ने रहे पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सोहीअनुसार नआएको प्रवक्ता शर्माले बताए । ‘खोई कहाँ छ दुई तिहाइको सरकार ? कहाँ छ शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको ओझ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
पछिल्लाे - एनआरएन नागरिकता अपूर्ण भन्दै संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता
अघिल्लाे - पाँच भाषामा प्रधानमन्त्रीको ट्विट : पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बस्यो